Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Baaraysa Qoyas laga barakaciyay xero ay deganaayeen | SAHAN ONLINE
MUQDISHO – Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedaymo hore loogu jeediyay ,waxayna ballan qaaday in ay baaritaan ku sameyn doonto warar sheegaya in kumanaan qoys oo kasoo barakacay abaaro iyo dagaalo si qasab ah loogaga saaray xero ay ku noolaayeen gudaha Muqdisho.
Qaramada midoobay iyo Dallada ay ku mideysan yihiin ururada aan dowliga ahayd ayaa sheegay in qoysas gaaraya 4,000 ama 20,000 oo ruux in guryahoodii baldoorsaro la dul mariyay bishii hore duleedka magaalada Muqdisho.
Qoysaskan ayaan loo ogolaan in agabkii gurtaha u yiilay ay qaataan horayna looma sii-sheegin in laga burburin doono guryahooda.
Saraakiil kamid ah hay’adaha gargaarka ayaa laga soo xigtay in ay arkeen askar ku labisan dareeska ciidamada dowladda kana qeybqaateen burburinta guryaha barakacayaash.
Wasiirka Qorsheynta iyo Maalgelinta dowladda Federaalka Soomaaliya Jamaal Xasan ayaa sheegay in kulan ay la qaateen Qaramada Midoobay in dowladda Soomaaliya ay baareyso wararka sheegaya in qoysas si qasab ah xeryihii ay ku noolaayeen looga saaray.
…” Waxaan baaritaan ku sameeynaynaa sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen,kadibna warbixinta aan ka sameyno ayaad ku arki doontaan waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen.”ayuu yiri wasiirka qorsheynta dowlada federalka.”ayuu yiri Jamaal Xasan.
Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka(OCHA) ayaa mar kale cambaareeyey burburinta ,waxayna sheegeen in dadka si qasab ah guryahooda loogaga saaray iyo horumarinta ay Soomaaliya ku talaabsanayso aysan ahayn mid isku dhiganta.
…Guryo kaliya dadkaasi lagama burburin balse dhismayaasha adeegyada aasaasiga ah oo ay hay’adaha gargaarku bixiyeen sida musqulo,xarumo waxbarasho,xarumo bulshadu ku kulanto ayaa la burburiyay”ayuu yiri Peter De Clercq Madaxa OCHA ee dalka Soomaaliya..”ayuu yiri
Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in abaaro iyo dagaalo ay dad gaaraya 2 milyan oo qof ku qasbeen iney ku barakacaan gudaha dalka Soomaaliya.